Yini udweshu? – Buza Noma Yini
Solved10.86K views July 6, 2021 General
Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe luyini udweshu?
Umchazi Wodweshu9	 Posted June 8, 2021	 0 Comments
Udweshu ingxabano ekhona phakathi kwabalingiswa ababil kumbe ngaphezul, beba nokungabon ngaso linye omunye edonsa ebhek le nomunye edonsa ebheka le, kuyak kwenzek futh udweshu siluthola ku mlingeswa yedwa, ephak ethulul ngenkinga abheken nayo. Udweshu luhluken kabili, udweshu lwangaphakathi kanye no dweshu langaphandle.
Yilolu oluba kumlingiswa ngamunye, epheka ethulul ngenkinga abhekene nayo. Isibonelo: umlingiswa uma ezozibuza ukuth ngidle noma ngingadli, kokunye simthol ethi ngiye ngingayi. Konke lokhu kwenzeka emqondweni womlingiswa.
Lona yilolu oluba phakath kwabalingiswa ababil noma abevil, esingash ukuth ingxabano kubalingiswa bengabon ngaso linye, omunye edonsela kolunye uhlangoth nomunye edonsela kolunye uhlangoth ngenkulumo. Isibonelo, uma abalingiswa bexaban ngokuthil bengavumelan ngokuthil.
Ngakhok umah siphendul umbuzo ngodweshu kumel siluchaz kuqal ebese siveza izinhlobo zalo nazo sizichaze.
Okubalulekil ngodweshu ukuth kumel kube khona ukuphamban kwemicabang kumbe kwemibono.
Jabu Chamane6	 Posted June 8, 2021	 0 Comments
Kukhona udweshu lwangaphakathi nodweshu lwangaphandle. Ake silucubungule ngokwehlukana kwalo.
Udweshu lwangaphakathi – Lapha umbhali wakha ukungqubuzana kwemicabango kumlingiswa oyedwa, ethatha ebeka akha ediliza. Kwesinye isikhathi umlingiswa umakhela isimo lapho edliwa umzwangedwa noma ezwakale esekhuluma yedwa kwesinye isikhathi aze aphimisele. Lokhu kwenza kube sekutheni kuthiwe umlingiswa unezingqondo noma izinhliziyo ezimbili, enye imtshela lokhu kanti enye imtshela lokhuya.
Udweshu lwangaphandle – Lapha sithola abalingiswa bengqubuzana ngokuthi baqophisane ngamazwi. Kwesinye isikhathi baze bathathelane ngisho izikhali, bagqemane izingozi, bakhwingcelane imikhono, kube kubi kubenjeya. Indaba yonke ikhushulwa yilo lolu dweshu lwangaphandle ngoba luba nochungechunge lwezehlakalo. Udweshu ludala uheho, bese kuthi ofundayo anamathele encwadini sengathi ubanjwe yinomfi, ngoba enevuso nelukuluku lokufuna ukwazi ukuthi kazi iyozala nkomoni. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi umbhali uma ebhala inoveli, udweshu lube yiwona mgogodla wendaba.
Jabu Chamane Answered question June 8, 2021
Jabu Nkosi4	 Posted June 8, 2021	 0 Comments
Udweshu ukunqubuzana kwemibono phakathi kwabalingiswa\_ ukungaboni ngasolinye phakathi kwabalingiswa ababili kuyaphezulu.
Jabu Nkosi Answered question June 8, 2021